NY MERA "HERO MACHINE" Malaza eto Chine sy ny firenena hafa.-Company News-Sunpai Industries Limited
MARTIERA "MERO HERO" antsika dia malaza eto Chine sy ny firenena hafa.
Fotoana: 2020-01-13 Hits: 45
HERO MACHINE dia mpanamboatra matihanina manao famokarana sy famolavolana milina plastika, toy ny milina mitsoka Film, milina fanaovana kitapo plastika, milina fanontana, milina fanodinana plastika, milina fanamboarana sns Miaraka amin'ny traikefa efa an-taonany maro momba ny fahombiazan'ny matihanina sy ny tsara aorian'ny fanompoana, ny HEROMACHINE dia nankatoavina ho vokatra mendrika ho an'ny tetik'asan'ny governemanta sy tetik'asa tsy miankina manerana ny firenena sy faritra 100, toa an'i Afrika, Moyen Orient, atsimo atsinanan'i Azia, Amerika atsimo, Eropa miaraka amin'ireo mpampiasa ampitan-dranomasina marobe.
Izahay dia nametraka ny tanjona "famokarana vokatra tsara indrindra, fametrahana marika tsara indrindra, fanatanterahana ny fitantanana tsara indrindra, ho valin'ny fifaninanana fanatontoloana".
Mifanaraka am-pahavitrihana ny tombony azon'ireo mpiara-miasa amintsika iraisam-pirenena sy teknika avo lenta izahay amin'ny fikarohana sy fampandrosoana ny vokatra vaovao ary ny fanatsarana ny teknika. Ny orinasa misy anay dia miorina ao an-tanànan'i Ruian. Sahabo ho 30 km miala ny seranam-piaramanidina Wenzhou, adiny 3 amin'ny fiaran-dalamby eo anelanelan'ny Shanghai, antsasak'adiny amin'ny lamasinina eo anelanelan'ny yiwu.
Manana fitantanana fanamboarana tsara sy rafitra fanaraha-maso kalitao izahay hahazoana antoka fa ny milina tsirairay dia tonga lafatra amin'ny kalitao. Manome serivisy feno fiheverana izahay ary mihevitra ny mpanjifanay ho harena lehibe. Vonona izahay hanome ny varotra mialoha sy tsara ary aorian'ny varotra. Azonao atao ny matoky ny vokatray amin'ny isan-jato feno.
Te hiara-hiasa amin'ny namantsika izahay ary hiara-mandroso. Mihaino izahay ary manantena ny fanontanianao sy ny tetik'asa mahaliana ary koa mahomby miaraka aminao!
Fikarakarana mafana avy amin'ny orinasa Sunpai